Accounting, Audit, Mutero | Ruzivo runoshanda kumunhu wese.
Rudzi: Kuongorora, Kuongorora, Mutero
Nditaurire, ndapota, ndechipi musiyano pakati pechiito, invoice uye invoyisi?
Ndokumbira undiudzewo kuti ndeupi mutsauko uripo pakati pechiito, invoice uye invoice? Mwanasikana wamambo akapindura zvakanaka kupfuura zvese, asi nezve pepa remuchimbuzi - rakaomarara.Ivo invoice igwaro pakanyorwa kuti imarii yezvinhu / mabasa / masevhisi ...
Chii chinonzi royalty franchising? nemuenzaniso
chii chinonzi humambo, kushambadzira? semuenzaniso Nezve franchise yehove, ndinoda kudzidza zvakawanda. Ini ndinonzwisisa kuti hapana makwikwi mazhinji muchikamu chino. Asi izvo, hapana kukwikwidza kukuru. ...
Nditaurire, ndapota, ndichati chii chichava kugovera mushumo wekutanga
Ndokumbira undiudze kuti chii chinenge chatumirwa pachinyorwa chekumberi D71 K51 - mari yakapihwa muaccount D60 K71 - zvinhu (kana zvinhu) zvakabhadharwa cheki D10 (44) K60 - izvo zvinhu (zvinhu) zvakapinda ...
Kudhindwa kwehuwandu hwezvinhu kune mutengi
Kuendesa muridzi wezvinhu kumutengi Chinangwa chekupinda mune chero chinhu chekutengesa chiri kutengesa pfuma kuwana mukana uye kugona kurasa imba iyi. Panguva ipi iyo mutengi anowana kodzero dzekuva muridzi? ...
Inguva yakareba sei kusvitsa kwekubhadhara mutero kunodzoka?
Inguva yakareba sei mushure mekunyora mutero wekudzosa mutero unodzoserwa? Zvinyorwa zvekubvisa mutero zvinoendeswa mumakopi maviri. Imwe kopi kuhofisi yemutero, uye yechipiri inosara newe uine katsamba nezve izvo zviri kuuya. ...
makambani ekuongorora. Ndezvipi zvinyorwa zvekuongorora zvinoshanda, chii chavanoita?
makambani ekuongorora. chii chinoitwa nemakambani ekuongorora, ndeapi mabasa avo? http://akfpartner.ru/auditorskie-uslugi Pane imwe nzvimbo inonakidza kwazvo kwaunogona kuwana mhinduro kumubvunzo wako unonakidza ... Pane ino saiti unogona ...
Kubvunzurudza mubvunzo unotsanangura kushandiswa kunyoresa kukosha
mubvunzo wekuverenga, tsanangura kukosha kwekutumira mumutauro uri nyore 1) Dt 62.02 Kt 62.01 - pa 62.02 kubhadhara (kufambira mberi) kunoonekwa, uye pa 62.01 - zvinogamuchirwa nemutengi. Iyi wiring inoitwa ne ...
Mutero wemunhu wega unobhadharwa sei? mutero unoverengerwa kubva, nguva yekubhadhara?
Mutero wemunhu wega unobhadharwa sei? mutero wakaverengerwa kubva, nguva yekubhadhara? Kungofanana nevamwe vanhu vese, zvakakosha kuti vashandi vachengete uye vaendese kubhajeti pazuva ...
Chii chinyorwa chinoenderana? Inongova nyore mutauro weRussia.
Chii chinonzi kukanganisa account? Chete mune yakapusa Russian. Lyudmila Dmitrievna, iwe wakatsanangura zvese zvakajeka, ndatenda! Zvinosiririsa kuti iwe wanga usiri wangu mudzidzisi webo. accounting kuInstitute! Kupindirana ...
chinangwa chekuita basa rezvemabhizimisi. o Kubhadhara ruzivo o Kubhadhara zvebasa o Rutsigiro rwemashoko
chii chiri chinangwa chebhizinesi. o Kuita purofiti o Kupihwa kwemasevhisi o Rutsigiro rwemashoko Ona Chinyorwa, chemasangano ese ezvokutengeserana - kuita purofiti, kumasangano asiri ezvekutengesa - ekuzadzisa zvinangwa, ...
Ndinofanirwa here kukumbira UTII apo iwe unyoresa SP?
Ini ndinofanira kubva ndanyorera UTII kana ndichinyoresa mumwe muzvinabhizimusi? Tumira chikumbiro cheyakareruka mutero system mukati memazuva mashanu mushure mekunyoresa nevakuru vemitero. Uye paunotanga chiitiko chinowira mukati ...
Inventory is…. Chimwe zana muzana 3 Inventory ndeiyi: 3. Kujekeswa kweicho chaicho chivakwa uye zvikwereti zvemari nekuzvienzanisa nedata rekuverenga pane rimwe zuva. ZVINHU 1,2,3,4 "... 1. Kupa…
iyo yakasunungurwa yakawanda yebasa rekushanda sechikonzero chekukurumidza kwavo, sei kuziva?
iyo yakaburitswa huwandu hwemashandisirwo emari semhedzisiro yekumhanyisa kwavo, maitiro ekuona ?? Kufananidza kwezviratidzo zvekudzoka kwekushanda capital kunokutendera kuti uone kukurumidza kwayo kana kudzikisira. Kuburitswa kwakazara kunoitika kana mugore razvino huwandu hwekutenderera ...
Nzira yekuziva sei mari yekutengesa kubva kutengeswa kwemiti? D-90, K-99
maitiro ekuona mhedzisiro yemari kubva mukutengesa zvigadzirwa? D-90, K-99 Muenzaniso wekuratidzira mu accounting uye mutero wekutengesa kweakapedza zvigadzirwa. Muridzi wezvigadzirwa zvakapfuudzwa kumutengi panguva yekuchinjisa Dhibhiti ...
ndiudzei chinonzi subkonto?
ndiudze chii chinonzi subconto? Ongororo. Semuenzaniso, account 10 - zvishandiso, mukupararira pane subconto - masheya, mbishi zvigadzirwa, nezvimwewo Subconto - chiratidzo chekuongorora icho chinokutendera iwe kujekesa iyo account maererano neyaimbozivikanwa kare ...
Iwe unoda mari yakawanda sei kuti uzarure katekete uye nezvemazana kutenga zvigadzirwa?
Marii yaunoda kuvhura danga uye nezve iyo huwandu hwekutenga zvinhu? Mumwe wandinozivana naye akahaya kiosk diki muChelyabinsk. Kuvhura kwakatora zviuru zana zveRubles. , ipapo zvimwe ...
Ndiudze, chii chiri musiyano pakati pezvitoro uye zvekutengesa?
Ndiudze, ndeupi musiyano uripo pakati pekutengesa nekutengesa? Mune mutengi. Iko hakuna pfungwa yekutengesa-kutengesa mumitemo. Iko kune tsananguro yekuti kushambadzira ndiko kutengesa uye kutenga kwezvinhu zvekushandisa kwako pachako. Wholesale kutenga pasina chinangwa chekushandisa kwekupedzisira, ine ...
Nekubhadhara kwezororo-NDFL? Sei ungaita wiring? Nenguva yekubhadhara? Zororo rinofanira kuva muchitauriri che z / p kana
Mutero wemunhu wega wega unowanikwa kubva mubhadharo wezororo? Kubhadhara rini? Kubhadhara zororo kunofanirwa kuve mune chirevo chemubhadharo kana wega mutero wemubhadharo kubva mubhadharo wezororo unoendeswa panguva yekuburitswa kwemubhadharo wezororo, unogona kunyora account yemubhadharo, kana munhu akaenda ...
Chii chinotarisirwa mutengo?
chii Chinoratidza Mutengo? Ndichanzwisisa izvi kana mutengo wacho usina kugadzikana Mutengo wekuratidzira ndiwo mutengo uri pazasi uyo zvinhu zvacho zvisingakwanise kutengeswa panguva yekutengesa kunze.
Nhai! Ndinoda kuziva kuti ndechipi chinotarisirwa na accountant calculator muresitorendi, chii chandinofanira kuita?
Mhoroi! Ini ndoda kuziva kuti nderipi basa reakaunzi accountant muresitorendi, ndeapi mabasa aanofanira kuita? Dhirowa makadhi ekuverenga ezvakagadzirwa uye zvakatengeswa zvigadzirwa. Iri basa rakaoma uye rakaoma. Chokwadi, ikozvino pane zvakakosha ...
Mibvunzo ye55 mu database yakagadzirwa mu 0,588 masekondi.